Orinasa scooter elektrika - mpanamboatra scooter ambongadiny, mpamatsy
Fampisehoana tena tsara-Ity scooter elektrika ity dia misy maotera 350 watt nohavaozina, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 25km / h ambony indrindra ary 30km ny halaviran'ny mpamily, izay mahazaka mora foana 15,1 amin'ny hantsana mideza.
Drafitra aforitra tokana - ny scooter elektrika dia azo aforitra haingana amin'ny alàlan'ny fametahana paompy 1 segondra. Rehefa mivalona, ​​ny scooter dia azo entina amin'ny tanana iray, ka hahatonga azy io ho mpiara-dia amin'ny mpandeha tonga lafatra.
Ny valiny azo antoka sy azo antoka dia azo antoka sy azo itokisana. Ny rafitra freins tena tsara dia mahatonga ny freins hamaly haingana kokoa ary hanatsara ny fiarovana mandritra ny fampiasana. Ny mpitroka hatairana eo alohan'izay dia manome fiononana ambony indrindra amin'ny mpamily. Ny rafi-pitabatabana avo lenta dia misy ihany koa ny fanafoanana ny angovo EBS, ary ny fender any aoriana koa dia manana asan'ny freins. Ireo kodiarana eo alohany dia miaraka amina rafitra fampidirana hatairana, izay afaka mampiorina kokoa ny fiara.
Mitaingina moto-fomba vaovao fitsangantsanganana vaovao: Andramo ary andramo ny fomba vaovao mitaingina môtô scooter! Tsindrio fotsiny raha hanomboka.
Tsy manam-paharoa sy tia namana ity scooter elektrika olon-dehibe ity, miaraka amina pedal tsy-slip tsy hipetraka (izay mahazaka tongotra lehibe kokoa), jiro mba hiantohana amin'ny alina azo antoka ary fampisehoana LED mazava hanamorana ny fitondrana mitaingina.
Mombamomba ny mpitaingina: Ity scooter herinaratra ho an'ny ankizy mahafinaritra ity dia mety indrindra alehan'ireo ankizy kely eo akaiky eo. Natao manokana ho an'ny mpitaingina 8 taona no ho miakatra. Ny lanjany farany ambony dia voafetra ho 50kg.
Môtô sy Throttle: maotera mandeha ambany fikojakojana sy milamina somary mangina, manomboka amin'ny 7 MPH. Mba hanafainganana dia manitsaka ny scooter ianao ary ampiasao ny bokotra mpanafaingana mba hanafainganana.
Bateria sy famahanana: ampiasain'ny bateria asidra mitarika maharitra, ny scooter elektrika ho an'ny ankizy dia afaka mandeha 7 ka hatramin'ny 5 kilaometatra amin'ny vola tokana. Ahitana charger.
Kodiarana sy frein: Ny kodiarana mafy maharitra 6-inch dia manome fiara milamina sy malama, raha ny frein-tongotra kosa mandroaka ny maotera mandeha amin'ny herinaratra, azo antoka sy tsotra ny fijanonan'ny fiara.
Tabilao sy solosaina: mora entina sy tahirizina ny endriny alimina maivana an'ny scooter elektrika ho an'ny ankizy. Rehefa lany ny bateria dia lasa scooter pedal izy, izay afaka mitaingina tsy mahazaka ary mitazona azy ho mahafinaritra.
1. Ny scooter elektrika dia natolotra avy amin'ny mpanamboatra.
2. Ny batterie dia efa nampidirina mialoha ho 50% ivelan'ny boaty mba hahamety anao.
3. Ny scooter elektrika dia mandeha amina fitsangantsanganana maro ary miverina tsingerina any amin'ny orinasa mba hahazoana antoka ny kalitao. Ny dashboard dia mety mampiseho tsingerina fandefasana entana sy kilaometatra vitsivitsy nitaingina ny daty nahazoana azy.